Etu ị ga - esi nagide nsogbu mmekọrịta na - egbu egbu | Bezzia
O di nwute, mmekorita na-egbu egbu di n 'ehihie na ọ dị obere onye ahụ ahụbeghị ahụhụ n'oge ụfọdụ na ndụ. Typedị mmekọrịta a nwere ike ịdị n’ezinaụlọ, nke onwe ma ọ bụ n’ebe ọ na-arụ ọrụ. N'ihe banyere di na nwunye, inwe mmekọrịta na-egbu egbu na-eme ka nkekọ e kere eke daa mbà ma ọnọdụ ahụ nwere ike bụrụ nke a na-agaghị agbanweli.
Nsonaazụ na nsonaazụ nke inwe ụdị mmekọrịta a dị oke njọ, tumadi n'ihe banyere uche ma obu uche. N’isiokwu na-eso nke a, anyị ga-ekwu maka nsogbu mmadụ na-enwe ma ọ daa n’emeghị ka ya na ya nwee mmekọahụ.
1 Kedu ihe si na nsonaazụ na-egbu egbu
2 Ihe ị ga - eme mgbe ịmechara mmekọrịta na - egbu egbu
Kedu ihe si na nsonaazụ na-egbu egbu
Gị na onye ọzọ inwe mmekọrịta na-egbu egbu bụ ihe ọjọọ nye di na nwunye ahụ na nsonaazụ ya nwere ike ịdịgide ogologo oge n'agbanyeghị mmekọrịta ahụ etisasị. Ọnọdụ uche na nke mmetụta uche nke ọtụtụ ndị mmadụ mebiri n'ụzọ dị oke njọ ma dị njọ.
N'ọtụtụ ọnọdụ, onye tara ahụhụ ma taa ahụhụ mmekọrịta ahụ na-egbu egbu na-ata ahụhụ dị egwu dị ka nchegbu, ịda mbà n'obi, ma ọ bụ ùgwù onwe onye bibiri. Typedị nsonaazụ a na-emetụta ọnọdụ uche nke mmadụ. Ọ bụrụ na emesoghị ndị sequelae ndị a etu ha kwesiri, onye na-ata ahụhụ ha nwere ike ibute nsị nke ga-emebiri mmekọrịta gị na ndị ọzọ n'ọdịnihu.
Ihe mbụ mmadụ ga-eme bụ ịmata n’ezie na ha nọ na mmekọrịta nsị na mgbe ahụ ọ dị mkpa ịhapụ mmekọrịta dị otú ahụ ozugbo enwere ike. Agbanyeghị, ihe kachasị mkpa bụ ịnagide n'ụzọ dị mma na mmetụta na mmetụta dị iche iche na-egbu egbu.
Ihe ị ga - eme mgbe ịmechara mmekọrịta na - egbu egbu
N'ihe banyere ịhapụ mmekọrịta na-egbu egbu, ọ dị mma ịgbaso usoro ndụmọdụ ga-enyere gị aka ịdịkwu mma na onwe gị:
Dabere na nke ezigbo ndị enyi na ezinụlọ.
Ọ dị mkpa ịme ụfọdụ ntụgharị uche ma ọ bụ izu ike iji nyere gị aka ịhapụ echiche ndị ahụ na-adịghị mma.
Ọ bụ ihe amamihe dị na iwepụta oge naanị gị tupu ị banye na mmekọrịta ọzọ.
Ọ bụrụ n'ịchọpụta na ọnọdụ mmetụta uche gị adịghị mma, ọ dị mkpa itinye onwe gị n'aka onye ọkachamara.
Havekwesịrị iwepụ mmetụta nke ikpe ọmụma na lee anya n'ihu.
Ọ dị mma ịnwa imete ndị enyi ọhụrụ. iji nyere gị aka ichefu ndụ gara aga.
Mee elu mee ala, ịmalite mmekọrịta na-egbu egbu na akụrụ abụghị ọrụ dị mfe nye onye ọ bụla. Agbanyeghị ọ dị mkpa ịme ya, ebe ọ bụ na i nweela ike ịhụ nsonazụ na nsonaazụ nke nsị dị otú ahụ dị oke njọ. Ọtụtụ oge, onye ahụ emetụtara na-eme ka onye ahụ nwee obi amamikpe maka ihe ndị mere n'ime mmekọrịta ahụ. Ta onwe gị ụta maka ihe niile ga-ezere oge niile ebe ọ bụ n'onwe ya, mmetụta a bụ ụdị nsị ọzọ nke a ga-ewepụ. Na-emeso ndị ọzọ ihe kpatara nsogbu bụ isi mgbe onye ahụ metụtara nwere ike iwughachi ndụ ya ma nwee ụdị mmekọrịta siri ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Psychology na di na nwunye » Psychology » Pingnagide nsonaazụ nke mmekọrịta na-egbu egbu